मोर्चाले सरकारसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्छ : सुमन | Nepal Britian
मोर्चाले सरकारसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्छ : सुमन
काठमाडौं । संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकमा १५ वटा थप संशोधन परेको छ । सत्तारुढ दलभित्रैबाट संशोधन विधेयकमाथि संशोधन परेको छ । संशोधन विधेयक पास हुने सम्भावना नदेखेपछि सरकारसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने पक्षमा मोर्चा पुगेको छ ।
मनिषकुमार सुमन, महासचिव सद्भावना पार्टी
० मधेशी मोर्चा अब कसरी अघि बढ्छ ?
– मधेशी मोर्चासँग ३ बुँदे सम्झौता गरेअनुरुप सरकारले मागमध्ये केही बुँदा समेटेर संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । त्यो विधेयक परिमार्जन गरेर आपसी छलफल र सहमतिका आधारमा केही परिमार्जनसहित पारित गरौं भनेर हामीले आग्रह गरिरहेका थियौं । तर संशोधन विधेयक अगाडि बढिनरहेको अवस्था थियो । यो बीचमा हाम्रो आग्रहलाई लत्याउँदै सरकारले सहमति विपरित चुनावको मिति घोषणा ग¥यो । हाम्रो माग पहिला संविधान संशोधन गरौं, संशोधित संविधान रत्तिभर भए पनि हामी आफ्नो अस्तित्व बोध गर्नेछों । त्यसपछि संविधान हामी पनि मानौंला, हामीले मानेको संविधान कार्यान्वयन गर्न आतुर छौं । हाम्रो यो आग्रहलाई सरकारले लत्याउँदै गत ९ गते स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा ग¥यो । यो निर्वाचन हुन्छ भन्ने कसैलाई लागिरहेको छैन । यो निर्वाचन आफैमा जटिल छ । जुन आयोगको प्रतिवेदनलाई मानेर जुन निर्वाचनको कुरा गरिदैछ, त्यो प्रतिवेदन अधुरो र अपुरो छ । त्यो प्रतिवेदन सर्वसुलभ नभएको अवस्था छ । त्यसका विरुद्ध थुप्रै ठाउँमा आन्दोलन भइरहेका छन् । मधेशमा मात्र होइन, हिमाल र पहाडमा पनि त्यसविरुद्ध आन्दोलन भइरहेका छन् । सार्वजनिक नभएको आयोगको प्रतिवेदन सुनेकै भरमा जनता आन्दोलित छन्, भोलि त्यो प्रतिवेदन राजपत्रमा प्रकाशित भएर गाविस र नगरपालिकाको हिजोको बोर्ड फेरिन्छन, त्यसबेला जनता झन आन्दोलित हुने हो । त्यसकारण हामीलाई त त्यो निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन ।
० सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुभएको हो ?
– सरकारसँग हाम्रो सम्बन्ध तिक्तापूर्ण रह्यो । हामीसँग भएको ३ बुँदे सम्झौता एकपक्षी ढंगले उसैले तोड्ने काम ग¥यो । सम्झौताको तेश्रो बुँदा मसी नसुक्दै हामीले पूरा ग¥यौं । बाँकी दुईवटा हाम्रा माग सरकारले पूरा गरेन । आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता, शहीद घोषणा, संविधान संशोधनलगायतका कुरालाई अलपत्र छाडेर एकपक्षी ढंगले निर्वाचनको मिति घोषणा ग¥यो, यो कुरा हामी मान्दैनौं ।
० मधेशी मोर्चा ब्याक फायर भयो भन्ने चर्चा छ नि ?
– हामी ब्याक फायर भएका होइनौं । हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाबाट समाधान खोजेका हौं । शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने ठाउँ भनेको संसद हो । सद्भावना पार्टीले संसद परित्याग गरेकै थियो, तर पछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चासँग हामी आबद्ध भयौं । मोर्चाका अन्य घटकहरु हाम्रो एजेन्डामा सहमत भएनन्, हामी एक्लो भयौं, त्यसकारण हामी संसदमा फर्केका हौं । संसदको जिम्मेवारीअनुसार हामी पनि अगाडि बढ्छौं । मोर्चाको आन्दोलनभरि हामीले काठमाडौं छाडेका थियौं, त्यस अवधिमा हामी मधेशी जनताका माँझ रहेर काम गरेकै हौं । समाधानको बाटो के हुनसक्छ भनेर ओलीजीजस्ता नशलवादी सरकारलाई ढालेर नयाँ सरकार निर्माण गरेका थियौं । नयाँ सरकारले पनि हामीसँग तीन बुँदे सम्झौता गरेको थियो, तर पूरा गरेन । अब त्यो सरकारसँगको नाता धरापमा परेको छ, हामी पुनर्विचार गरिरहेका छौं । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा हाम्रो छलफल चलिरहेको छ ।
फिर्ता लिँदा प्रचण्डको विकल्प को हो ? देउवाजी हुनुहोला, देउवाजीको विकल्प को ? ओली । यी तीनैजनाको शेषनाथ, नागनाथ र भैरवनाथ हुन् । यी तीनमध्ये हाम्रा माग सम्बोधन गर्न को अगाडि बढ्छन ? भन्ने कुरामा हामी अड्किरहेका छौं । सरकारसँग हामीले समर्थन फिर्ता लिइसकेको खण्डमा अर्को सरकार बनिहाल्न अवस्था छैन । त्यसकारण हामीले वार्ता र संवादलाई निरन्तर राखिराखेका छौं । संविधान संशोधनको प्रकृयामाथि अर्को संशोधन हाल्ने आज अन्तिम दिन हो । हामीले चाहेको संशोधन संसदमा आज दर्ता गराउँदैछौं ।
० तत्कालीन प्रम ओलीले गर्दिन भन्नुभयो, प्रचण्डले गर्छु भन्नुभयो गर्नुभएन । यी दुई नेतामा के फरक भयो ?
– यी दुई नेतामा खासै फरक छैन । मधेशका मामिलामा यी तीनैजना सर्प हुन् । यी तीन मिलेर मधेश विरोधी सम्बिधान बनाए । आज संशोधन गर्दा किन मिलिरहेका छैनन् । नेकपा एमाले आफूलाई मधेशविरोध पार्टीको रुपमा खुलेर आइरहेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले मधेशी जनतालाई अभद्र गाली संसद र सडकसम्म गर्नुहुन्छ । यो संशोधन विधेयक, मधेशी, जनजाति, किसान उत्पीडित वर्गलाई अधिकार दिन सक्दछ । यो संशोधनविधेयकमाथि छलफलै हुन दिन्न, यो संशोधन विधेयक पारित भयो भने देशै टुक्रिन्छ, यसले देश धुजाधुजा गर्छ, मधेशीलाई अधिकार दिनु भनेको पाप हो भनेर चित्रण गरिरहेका छन् । ओलीजी मनमा लागेको कुरा बोलेर तिक्ता बढाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नबोली तिक्ता बढाइरहनुभएको छ ।
० स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने बेलामा सरकारसँग छलफल भएको थियो ?
– संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा निर्वाचनको विरोधी होइन, लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । यस्तो निर्वाचन समय समयमा भइराख्नुपर्छ । हाम्रो देशमा मात्र १९ वर्षसम्म निर्वाचन हुँदैन, यो भनेको लोकतन्त्रको अपव्याख्या हो । अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्ने नाममा निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । संविधान जारी गर्ने नाममा हाम्रा ४५ जनालाई गोली ठोकिएको थियो, त्यो संविधान हामीले मानेकै छैनौं, हामीले त्यो संविधान जलाएकै हौं । यदि हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ भने त्यो संविधान परिमार्जन गरेर अघि बढाऔं भनेका छौं । निर्वाचन घोषणाताका हामीसँग भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मिति घोषणा गर्न दिऔं मात्र भन्नुहुन्थ्यो । प्रचण्डजीलाई सरकार जोगाउने चिन्ता मात्र थियो । हामीले स्पष्ट भनेका थियौं, यो गल्ती नगर्नुहोस्, पहिलो संविधान संशोधन विधेयक पास गरौं, त्यसपछि हामीलाई पनि त्यो संविधानप्रति अपनत्व महुसु हुन्छ, त्यसपछि निर्वाचनमा जाउ । सरकारले एकपक्षी ढंगले निर्वाचन घोषणा ग¥यो, हामी यो निर्वाचन हाम्रा आधार क्षेत्रमा हुन पनि दिँदैनौं ।
० अब सरकार र मधेशीमोर्चाबीच कहाँनेर सहमति होला ?
– वार्ता र संवादबाट हामी अझै पनि पछि हटेका छैनौं । हाम्रा सम्बन्धमा तिक्ता आएको छ, तर समस्याको समाधान भनेको वार्ताबाट हुन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ । हामी प्रचण्डको बाटो समात्न सक्दैनौं, हामी भनेका गजेन्द्रबाबु र महात्मा गान्धीका अनुयायी हौं । हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले सरकारलाई झुकाएर छाड्छौं । यसलाई कसैले कमजोरी ठान्छ भने सडक आन्दोलनको विकल्प रहँदैन ।
विस्फोटक पदार्थसहित चार पक्राउ
सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
अन्तर्राष्ट्रिय भैँसीविज्ञ समगोष्ठीको चार बुँदे निष्कर्ष
शीर्ष नेताहरु प्रचण्ड निवासमा, प्रचण्ड भोलिदेखि चुनावीसभामा
चुनावी सभामा गीत प्रस्तुत
बम पड्काउने एक जना पक्राउ